wasiir Archives - Ceelhuur Online
Home > Posts Tagged wasiir
July 4, 2018 July 4, 2018 admin718
Wafdi ka socda dowladda Qadar oo maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyey wasiirka Dekedaha Soomaaliya Maryan Aweys. Wafdiga maanta soo gaaray Muqdisho ayaa waxaa hogaaminayay madaxa Dekadaha Dawladda Qadar. Waxayna kulan la yeesheen Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyagoona kawada hadlay horumarinta dekadaha Soomaaliya. Wasiirka […]
July 1, 2018 admin684
Khilaaf ka dhex Aloosan Gudoomiyaha G. Banaadir iyo Wasiirka Maaliyadda
October 4, 2017 admin620
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa la sheegay inuu is hor-taagay qorshaha Gobolka Banaadir loogu kordhinayo miisaaniyadda, gaar ahaan dakhliga uu ka helo Dekeda Muqdisho. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa bishii August ee sanadkan hor-geeyay Golaha Wasiirada warbixin ka hadleysa howlaha Gobolka iyo adeegyada lagama maarmaanka ah inuu […]
October 22, 2016 admin6602 Comments on Wasiir iska casilay Xukuumadda maamulka Galmudug
22/10/2016 JAMHURIYADDA FADARALKA SOMALIA Dowlad Gobaledka Soomaliyeed ee Galmudug U JEEDO Is casilid Ku Madaxweynaha Ku- Madaxweyne ku xigeenka Ku Godoonka Baarlamaanka Og Wasiirka Wasaaradda Anigoo ah Abdi Fatah mohamud Ahmed Wasiir ku xigeenka wasaradda Bay’adda Dhirta iyo Daaqa ee Dowladda Gobaledka Galmudug Waxaan halkaan ku cadatnayaa maanta oo ay ku beegan tahy 22/10 2016 […]
September 14, 2016 admin7107 Comments on Akhriso sababta wasiirka Maaliyadda Galmudug isku casilay.
Wasiirkii Maaliyadda Dowlada goboleedka Galmudug Mudane Cali Siciid Cumar ayaa maanta iska casilay xilkii wasaaradda maaliyadda Galmudug, Cali ayaa warqadda iscasilaaddiisa soo dhigay bartiisa facebookga, waxa uuna ku sababeeyey arimo gaar u ah isaga. Waa wasiirkii labaad iska casila xukuumadda Galmudug, waxaa 24 April 2016 iska casilay xilkii wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Mudane Maxamed […]
August 24, 2016 admin6252 Comments on Weerar xalay lagu qaaday guri uu daganaa wasiiru dowlaha Gaashandhigga